Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Birmingham oo Xasuuqa Ogadeniya Soobandhig usameeyay : Unveiling The Hidden Genocide “Qofki Ka Aamusa Xasuqa Ogadeniya waxuu lamid yahay Danbiilihi geystay”
OYSU Birmingham oo Xasuuqa Ogadeniya Soobandhig usameeyay : Unveiling The Hidden Genocide “Qofki Ka Aamusa Xasuqa Ogadeniya waxuu lamid yahay Danbiilihi geystay”
Posted by ONA Admin	/ December 15, 2013
14/12/13 Sabti Magaalada Birmingham waxaa lagu qabtay barnaamij aad u weyn oo looga hadlayay Xasuuqa Ogadeniya Barnaamijkan oo loogu magac daray (Unveiling the Hidden Genocide: The Ogaden Untold Stories) waxaa soo qaban qaabiyay Ururka dhalinyarada OYSU Birmingham.
Madashi shirka ee Barnaamijkan lagu qabanayay waxaa daqiiqado kadib markii iridka la furayba isasoo buux dhaafiyay dhalinyaro aad u da’yar oo u dhaxeeya badankoodu 16- 24 sanno, dhalinyaradaas oo aad u xiisaynayay kasoo qeybgalka barnaamijkan. Waxaa Albaabka hore ee lagasoo galaya taagnaa gabdho edeb, wanaag iyo hadal wanaagsan oo soo dhaweynbadan kuwaas oo kuu hagaya kursigii laguugu talo galay inaad fadhiisato. Sida caadada ah marka shirarka laga soo qeybgalo waxaa dhacda inaad sugto saacad iyo kabadan in barnaamijku ku bilowdo- saacadaas oo loo yaqaano “Breakdown” oo loogu talogalay in dadka la isla sugo soogalitaankooda. Madashan se waxaan kala kulmay arrin midaas ka gadisan oo markii aan galay mashrixiiba waxaan la kulmay filimo soconaya oo ka hadlaya munaasabada shirkan. Filimadaas oo ay ka muuqdaan, Waxqabadka ururka dhalinyarada OYSU, Taariikhda dhulka Ogadeniya, iyo tacadiyada gumeysiga Ethiopia ka geysto dhulka Somalida Ogadeniya.
Aniga oonba daqiiqado fadhiisan waxaan durbadiiba fahmay dulicda uu leeyahay shirkan, waxaana ku hakaday daawashada muuqaalada quruxda badan ee sida aadka u farsameysan loosoo aggaasimay. Mudo kooban kadibna waxaa laguda galay munaasabadi shirka.
Sheekh Mubaarak oo ah xubin kamida Dhalinyarada OYSU ayaa ku bilaabay Aayado Qur’an ah, waxaana xigay laba gabdhood oo magacooda heynin oo halkaas ka aqriyay Mawduuca Shirka iyo qaabka ay wax u dhici doonaan iyaga oo nagu wargaliyay Dhimsaha guriga- sida musqushu meesha ay ku taalo, Hadii Dab dhaco sida ugu sahlan iyo albaabada uu ka koobanyahay gurigu. Intaas kadib waxaa si toos ah u bilowday shirkii.
Aniga ayaa Dhibkaas Igu dhacay
Madashii shirka waxaa soo istaagay 5 xubnood oo dhalinyaro ah oo midkastaaba ka hadlayo dhibaato soo gaadhay isaga. isaga oo matalaya qof kamida dadka ree Ogadeniya. Iyaga oo matalaya in dhibaatadaas ay iyaga ku dhacday- waxayna si aad iisoo jiidatay, ugawarameen dhibkaas gumeysigu u geystay, Fariintaas oo miisaan aad u culus wadatay waxay igu abuurtay dareen ah, hadii aan qofkaas ahaan lahaa maxaa ila gudboonaan lahaa, Qofkasta oo taariikhdiisa laga waramo waxaan ana niyadayda soo galaysay xanuun aan la qeybsanayo dhibanayaasha Somalida Ogadeniya ee gumeysiga (Woyanuha) ku gumaado shacabigaas aan waxba galabsanin, Sidoo kale waxaan dareemayay dhamaan dadka igu xiga in sideyda oo kale ay qiiradaas la wadagayeen dhalinyarada OYSU ee iyagu isku matalayay in dhibkaasi soo gaadhay. Barnaamijkan waxaa soo bandhigay Xaliimo, Ugbaad, Mubarak, Jibril, iyo Aniisa oo midkastaba sheeko taariikhi ah soo bandhigay.
Gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Gobolka Midland (Birmingham) Halgame Caydaruus ayaa madashi shirka lawareegay isaga oo u mahad naqay dhamaan xubnihii kasoo qeybgalay shirka, waxa uu si gaar ahaaneed ku amaanay dhalinyarada OYSU Birmingham isaga oo sheegay in si hagrasho la’aan ah ay usoo qaban qaabiyeen barnaamijkan quruxda badan.Waxaa kaluu gudomiyuhu u mahad naqay dhalinyarada da’yarta ah ee Somaliyeed ee kasoo qaybgashay shirkan. Xubnaha Kale ee OYSU Manchester iyo London iyo maamulada Jaaliyadahaas oo iyana shirka kasoo qeybgalay ayuu gudomiyuhu ku amaanay jidka dheer ay usoo mareen sidii ay shirkan uga qeybqaadan lahaayeen. Gudomiyuhu qodobo muhiim ah ayuu kahadlay aanse kuso koobo soojeedin guubabo dhalinyarta kusocotay.
Filim Taariikhda Ogadeniya
Waxyaalaha aan aadka uga helay waxaa kamid ahaa- Waxaan daawanay filim kooban oo ka hadlaya waxa ay u taaganyihiin ururka OYSU iyo meesha ay asal ahaan kasoo jeedaan. Filimkan waxaa ka muuqday wiilal iyo dhalinyaro da’yar ah oo kawaramaya shaqada ay qabtaan iyo Sababta ay u qabtaan iyo hadafka ay hiigsanayaan. Soo jiidasho gooni ah ayuu muuqaalkaasi lahaa, filim kolba meel kuu kaxayna ayuu ahaa, oo ay ka muuqato shaqo maalmeedka Ururka OYSU ka fuliyaan magaalada Birmingham. Waxaa kale oo filimka la socday taariikhda Ogadeniya. Quruxda iyo tayada filimkan loosameeyay- waxaan soo xasuustay Doorashadi OBAMA filimadi dadka loo daari jiray ee ka waramayay waxa wadanka ay u qaban doonaan xisbiyadaasi hadii la doorto, Waxaana niyadeyda ku abuurantay dareen ah in Ogadeniya Xorowday-Mar hadiiba dhalinyaradii Ree Ogadeniya ay sidaas u fikirayaan.. waxaa ii’sawirantay Xisbiyo u tartamaya Doorashada kursiga Madaxweynaha Ogadeniya Iyo Ogadeniya oo Xor ah…Inshallaah, Allaah ha inagu simo dhamaanteen.
Xasuuqa Iyo Taariikda Dadka Ogadeniya
Juweriya iyo Jibriil ayaa si wada jir ah usoo bandhigay Barnaamij Taariikheed aan halkan lagu soo koobi karin oo aan jecelahay inaad kaga bogan doontaan Barnaamijyada Ilays TV oo halkaas iyana wax ka duubay.
Juweriya ayaa kusoo gabagabysay kadib markii ay dhibaatada xasuuqa iyo sharafta ummada somalida Ogadeniya iyo kheyraadka ceegaagan dhulkooda’ kalmad aan filayo innuu hada ka hor yiri Demond Tutu oo ah nin caan ku ahaa la daggaalanka Adoonsigi Isirtakoorka Koonfur Afrika
Kalmadaas oo dhamaantayo nasoo jiidatay waxay markiiba cod u qaaday dadkii kasoo qeybgalay madasha shirka inta qof ee ku faraxsan inay ka aamusnaato dhibaatadii ay kasoo sheekeysay, iyo inta qof ee diyaarka u ah inay halganka Ogadeniya ka qeyb qaataan. Dabcan arrin laga aamusnaan karo ma ahayn dhamaan dadkii madasha fadhiyay waxay hal cod kor ugu dhawaaqeen inaysan ka aamusnaan karin tacadiga iyo xasuuqa lagu hayo shacbiga Ogadeniya-
Filim ku saabsan “21st Century OGADEN GENOCIDE”
Kulankan waxa uu taariikh cusub oo hor leh ayuu abuuray, in qof kasta oo aduunkan ku nool oo ka warhaya tacadiga iyo xasuuqa ogadeniya kasocda balse doorta innuu ka aamusnaado innuu lamid yahay midka geysanaya xasuuqa.
Taariikhdaas soo jiidasha leh waxaa ku xigay Filim kale oo kawaramaya Xasuuqa ka socda Ogadeniya lagasoo bilaabo sanadkii 2000 illaa hada xasuuqa ka jira Ogadeniya. Filimkan oo muddo dheer ay ka shaqeynayeen dhalinyarada OYSU Birmingham, waxa uu soo koobay dhamaanba cadeymaha ay beesha Caalamku ilaa hada inta la ogyahay ka hayaan, gaar ahaan Warbaahinta Caalamka, haayadaha xuquuql insaanka, Dowladaha. iyo waxaa kale oo ku jiray cadeymo dadkii dhibka loo geystay oo ka waramaya dhibaatooyinki naftooda loo geystay iyo waxii ay u soo joogeen. Filimkan oo socday muddo 20 Daqiiqo ah- waxa uu badalay madashi shirka isaga oo abuuray qiiro xanbaarsan ‘waxaa la jooga waqtigii wax laga qaban lahaa ee loo istaagi lahaa ka hortaga xasuuqa Ogadeniya.’
Shirkan oo marna shucurtayada cirkaas geynayay marna hididiilo, Rajo iyo farxad ku dheehneeyd waxaan laga tagi karin in la xuso cashadii sharafta laheyd ee ay nasiiyeen ururka OYSU. Cashadaas oo cunto aad u macaan aheyd, mac macaan badan, bariis iyo cabitaano ka koobnaa waxa ay dareen igu abuurtay ah, Gumeysiga Ethiopia waa na dili karaan, oo naftayada waa qaadi karaan, waa na ciqaabi karaan laakiin marnaba ma qaadi karaan Damiirkayaga iyo niyad wanaaga ummada Somaliyeed. Midaas waxa ay aniga i galisay shaqsiyan RAJO in maalin maalmaha kamid ah Ogadeniya xor noqon doonto lagana warami doono dhibaatadii gumeysigu u geystay shacabkan, midaas oo adkeyn doonta dowladnimada mustaqbalka Ogadeniyada Xorta ah.
Waxaan ka waramaya waa rajadi igu dhalatay ee ka faaiday ka qeyb galka Kawaranka Xasuuqa Ogadeniya. Shirkan waxuu igu abuuray dareen murugo leh aniga oo dareemay inaan kamid ahay dadkaas dhibanayaasha ah ee miciin iyo hoo midna heysan, xanuunkaas aniga oo qaba, waxa uu hadana igu abuuray Rajo aad u weyn markii aan dhageystay dhalinyarada da’yarta ah ee u taagan sidii loogu gurman lahaa ummadooda xoriyadna loo gaadhsiin lahaa. Waxaa awood badano fir fircooni leh iyo rajo igaliyay laba gabdhood o lagu kala magacaabo
Fartuun iyo Ramla, waxay soo bandhigeen gabayo luqada Afka Englishka ah ku baxayay midaas oo igu dhalisay in aniga laftigaygu aan ahay xalka raadinta xoriyada somalida Ogadeniya. in aan u istaago sidii aan u difaaci lahaa nafteyda iyo mida dadkeyga.
Halkaas laguma kala tagine, Najma ayaa noo daadihisay barnaamij kale oo lagu cabirayo dareenka xubnaha OYSU. midaas oo dadkii meesha kasoo qeybgalay gaar ahaan xubnaha cusub ee raba inay ku biiraan la daggaalanka Xasuuqa Ogadeniya, xog badan ka siisay waxa ay dareemayaan xubnaha ka howlgala ururka OYSU. waxaana su’aalo badan laga weydiiyay xubnahaas oo qaarkoodna ay weydiinaysay Najmo kadibna loo furay cod baahiyaha, xubnihi su’alaha qabay ururka shaqadiisa.
Mudadii uu shirku socday sidaan kor ku xusay waqtiba uma helin qofka igu xiga aan ku jaleeco oo wax ku weydiiyo, balse mudadii koobneyd ee cashadu socotay iyo iridka banaankiisa ayaa kula kulmay dhalinyaro kasoo qeybgashay waxaana isku dayay bal in dareenka aan qabo la ila wadaago iyo waxii uga baxay shirkaan.
xubnihii aan la kulmay waxay igu dhaheen, Waxuu ahaa shirkan “Inspirational”, Qiiro badan ayaa i gashay oo maba hadli karo mana ku koobi karo halkan. xubno kale waxa ay ii sheegeen in shirkan abaabul ahaa waqtigii loogu talo galayna ku aadan yahay, waxaana inawada faran in fariintan aan gaadhsiino guri kasta oo bani’aadam ku noolyahay. Xubno kale waxay igu dhaheen waxaan u baahanahay Media, Warbaahinta Caalamka waa in arrintan sidii ay uga hadli laheyd xooga aan saarno. Intaas ka badan lama aamusnaan karo iyo waxyaalo lamid ah oo aniga laftigaygu ahaa qeybo kamid ah dareenka igu dhashay hadii aan horey usii qabayna aan jecelahay in marlabaad si cusub iigu dhashay.
Abwaan Jaango ayaa kamid ahaa kasoo qeybgalayashi munaasabadan oo Halkaas dhaantooyin iyo suugaan halgameed ka jeediyay. Jaango waxa uu halkaas oo kale kaga waramay waqtigii uu halgankan ku soo biiray oo dabcan uu ku tilmaamay innuu ahaa 3 jir markii uu dareemay dhibaatada Ogadeniya balse 80 meeyadi uu ficil ahaan ugu istaagay sidii halganka ugaqeyb qaadan lahaa…
Shirkan waxaan ku soo gabagabeynaya innuu ahaa Shir Cilmiyaysan oo ku dayasho mudan…dhalinyarada OYSU UK gaar ahaan Birmingham oo soo qabanqaabisay madashaas waxaan leeyahay Waad mahadsantihiin.
Wariyaha ONA ee UK